GNOME 43 inoratidza zvimwe zvezvinhu zvitsva zvayachaunza | Linux Addicts
GNOME 43 inovheneka zvimwe zvezvinyowani zvayachasuma, senge adaptive Nautilus.
pablinux | 06/04/2022 18:43 | Desks
Pakupera kwemwedzi wapera, mumwe wangu Diego akatsanangura, kune avo vaisaziva, chii chinonzi GNOME desktop. kwasara zuva rimwe chete vakakanda GNOME 42, vhezheni nyowani yakaunza zvinofadza zvikuru maficha, uye pakati pezvandinofarira: iyo skrini yekushandisa. Nekuburitswa ikoko kwatounzwa, vakatodzika kubasa uye vatanga kusimudzira GNOME 43, izvo zvimwe zvinhu zvinotozivikanwa.
Chinhu chekutanga chinondibata ndechekuti Nautilus ichave "Adaptive", izvo zvandiri nani kushandura semhinduro. Uye ndezvekuti ichi chitsva cheGNOME faira maneja chakagadzirirwa kuve nani panharembozha, uye izvi zvinozivikanwa seyekupindura dhizaini pawebhu. Zvingave zvisina kunyatsofanana, asi handina kukwanisa kurega kufunga nezvazvo. Iyi dhizaini ishanduko huru, kunyanya kune vashandisi vePhosh.
1 GNOME 43 ichasvika munaGunyana
2 Dhizaini nyowani yedhisiki yekushandisa analyzer
GNOME 43 ichasvika munaGunyana
MuGNOME 43 pachave ne API yekudzorerazve mavara, iyo inotarisirwa zvakanyanya kune vanogadzira pane vashandisi. Vagadziri vanoshandisa API iyi vachakwanisa kushandura mavara ezvishandiso zvavo uye kuve neatomatiki inotsamira mavara ekugadzirisa. Ivo zvakare vanozokwanisa kugadzira presets inogona kushandiswa, semuenzaniso, recolor hwindo zvichienderana nekuona kweruvara chirongwa.
Kudzoka kwatiri, vashandisi, kune zvatinogona kushandisa kana kuona, GNOME 43 ichaunza sarudzo yekuchinja accent color, chimwe chinhu chinogona kuitwa muUbuntu 20.04 kunyangwe chiri muGNOME 42. Izvi zvakadaro nekuti chinhu chinoenderana ne libadwaita, uye Canonical yaenda kumberi.
Vachaunzawo muoni mutsva wemufananidzo anonzi Loupe, uyo anozopindura, uye zvirevo mumudziyo wekutora ye skrini. Saka iyo mureza ficha yave kuwanikwa muv42 ichave iri nani muGNOME 43.
Dhizaini nyowani yedhisiki yekushandisa analyzer
Iyo disk yekushandisa yekuongorora chishandiso ikozvino yakanyorwa muVala, uye inotevera ichave muRust. Iwe unogona kusaona kuvandudzwa munguva pfupi, asi inomisa zvinhu kuti zvienderere mberi mune ramangwana. Kune zvimwe zvese, uye kunyangwe paine zvimwe zvakawanda mu a chinyorwa chepurojekitizvimwe zvishoma zvinozivikanwa. Vachaburitsa rumwe ruzivo mumwedzi iri kuuya, kusvika Gunyana, apo inotarisirwa kuburitswa GNOME 43.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 43 inovheneka zvimwe zvezvinyowani zvayachasuma, senge adaptive Nautilus.
MangoDB yakagadziridzwa uye ikozvino yachinja kuFerretDB
Linux Mint 21 ichadaidzwa kuti "Vanessa", uye ichave yakavakirwa paUbuntu 22.04